Ọ dịghị Ọhụrụ Gonorrhea eriri na-egbu egbu mgbe niile; NBC weghaara akụkọ mbụ gbasara nje virus “dị njọ karịa HIV” - Ụwa 2022
Ọ dịghị Ọhụrụ Gonorrhea eriri na-egbu egbu mgbe niile; NBC weghaara akụkọ mbụ gbasara nje virus “dị njọ karịa HIV”
Ụdị gonorrhea na-egbu egbu, nke a chọtara na Japan afọ abụọ gara aga, akọwawo site na akụkọ akụkọ dị iche iche gụnyere CNBC na Hawaii, California, Norway, na Japan, na-eme ka ụjọ na-atụ na ọ nwere ike gbasaa ngwa ngwa ma gbuo n'ime ụbọchị ole na ole..
Mana ka mgbasa ozi obodo kpalitere nchegbu ọha na eze, erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) na Hawaii News Ugbu a na-ajụ nkwupụta ọ bụla nke ụdị ụdị a.
Achọpụtara nnukwu ụdị ahụ akpọrọ H041 butere otu nwanyị Japan na-arụ ọrụ mmekọahụ na 2011 wee na-eguzogide ọgwụ nje “ọgwụgwọ ikpeazụ” n'ime ezinụlọ cephalosporins - dị ka ọgwụ cefixime na ceftriaxone. Ahụbeghị ụdị a ọ nweghị ebe ọzọ.
Akụkọ banyere ikpe abụọ na nso nso a na Hawaii ebe gonorrhea na-eguzogide ọgwụ nje enweghị ihe jikọrọ ya na ụdị H041. Nguzogide na ndị ọrịa abụọ a mere ka ọ ghara ịgwọ ya na azithromycin, nke a na-erekwa dị ka Z-pac, nke bụ ọgwụ nje na-emekarị na mbụ. A hụrụ otu ụdị ahụ nke na-eguzogide azithromycin na Hawaii na Mee 2011.
"Enweghị multi-drug super resistant superbug ma na Hawaii ma ọ bụ United States. Anyị enweghị superbug na Hawaii nke m na-ekwughachi ọzọ, ma echere m na ọ na-eme ka ndị mmadụ mara na gonorrhea dị ebe ahụ, enwere ụdị ọhụrụ. nke na-eto eto ma na-agbanwe ma anyị kwesịrị ịma nke ahụ ma chebe onwe anyị, "Peter Whiticir sitere na ngalaba State Department of Health's STD/Aids Prevention Control kwuru.
CNBC ebipụtala mmezi maka akụkọ ya.
Enwebeghị ọnwụ sitere na H041 "ụdị superbug," ma William Smith, onye isi nchịkwa nke National Coalition of STD, kwupụtara na ọ bụ "ọnọdụ mberede… Ka oge na-aga, ọ na-adịwanye ize ndụ."
Ọ gara n'ihu ikwu, "Inwere ike ịkpata ọdachi dị ukwuu." "Nke ahụ bụ ihe dị egwu banyere nke a, anyị nọ n'ọnọdụ dị ala n'ihe gbasara ọrịa [Gụọ: otu ọrịa na-adịghị egbu egbu], mana ụdị a bụ ahụhụ dị egwu ma anyị enweghị ihe ọ bụla n'ụzọ ahụike iji lụso ya ọgụ ugbu a." Smith pụtara n'ihu ndị omebe iwu nzuko na-arịọ maka $54 nde iji mepụta ọgwụ nje ọhụrụ iji luso "oke elu" a ọgụ.
O yiri ka ruckus gburugburu nke a bụ ihe na-enweghị isi, dị ka otu ikpe pụtara na 2009 ma kọọrọ ya na 2011. Enwebeghị ihe àmà na-esote na ụdị H041 a bụ STD ọhụrụ nke dị njọ karịa AIDS dị ka CNBC si kwuo "ọkachamara" naturopathic. "dọkịta" Alan Christianson.
Enwere ike ịhụ nyocha na gonorrhea H041 nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Antimicrobial Agents na Chemotherapy ebe a.
Nke a bụ ihe kpatara swiiti ji dị njọ maka ezé gị: ihe niile ịchọrọ ịma
Ọ bụrụ na ị nwere eze na-atọ ụtọ, yabụ November bụ ọnwa maka gị. Mana iri swiiti nwekwara ike ịdị mma? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ka swiiti si emetụta ezé gị